Degso WhatsApp Messenger loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (140.00 MB)
Degso WhatsApp Messenger,
WhatsApp waa barnaamij si fudud loo rakibo oo fariin lacag laaan ah oo aad u isticmaali karto labada mobiil iyo Windows PC - computer (sida web browser iyo desktop app). Waad ku soo dejisan kartaa kuna isticmaali kartaa WhatsApp taleefankaaga ama waxaad ugu isticmaali kartaa sidii barnaamij desktop ah kombuyutarkaaga Windows PC ama Mac. Codsiga desktop desktop wuxuu ku shaqeeyaa iskudhaf ahaan barnaamijka WhatsApp ee lagu rakibay taleefankaaga. Si kale haddii loo dhigo, markii farriinta WhatsApp ay ku soo dhacdo taleefankaaga Android / iPhone, waxaad ka eegi kartaa oo aad uga jawaabi kartaa kombuyuutarkaaga. In kasta oo codsiga Webka WhatsApp uusan ahayn mid aad u horumarsan, wuxuu qabtaa shaqadiisa aasaasiga ah. WhatsApp-ka Windows-ka waxaa lagu hagaajinayaa waxyaabo cusub oo maalin walba lagu soo kordhiyo.
WhatsApp PC, oo nala kulmaya sida nooca desktop-ka ee barnaamijka farriinta caanka ah ee WhatsApp Messenger, wuxuu na siinayaa fursad aan WhatsApp ugu isticmaalno kombiyuutarradeena.
Codsiga, oo si bilaash ah loo bixiyo, waxaan raaci karnaa dhammaan farriimaheena degdegga ah ee desktop-ka ah waxaanna u diri karnaa faylasha, sawirrada iyo fiidiyowyada asxaabtayada Nooca Desktop-ka ee WhatsApp Messenger, oo noo oggolaanaya inaan si fudud ugu adeegsanno ku dhowaad dhammaan astaamaha ku jira noocyada moobiilka, dusha sare ayaa runtii waxtar badan leh.
Farriimaha - Fudud, Fariin La isku halleyn karo: Dhambaal ugu dir qoyska iyo asxaabta si bilaash ah. WhatsApp waxay isticmaashaa qadka internetka ee taleefankaaga si ay kuugu soo dirto fariimaha, marka lacag kama bixinaysid SMS
Wadahadalka Kooxda - Kooxaha Aad Jeclaan Lahayd Inaad Wada Hadasho: La xiriir kooxaha muhimka kuu ah, sida qoyskaaga iyo saaxiibbadaa. Wadahadalka kooxda, waxaad la wadaagi kartaa fariimaha, sawirada iyo fiidyowyada ilaa 256 qof hal mar. Waad magacaabi kartaa kooxdaada, waad aamusi kartaa ama waxaad dejin kartaa ogeysiisyo sidaad doorbideyso.
WhatsApp on Web iyo Desktop - Ku Sii Wadahadalka: Iyadoo WhatsApp ku jirta websaydhka iyo desktop-ka, waxaad si habsami leh ugu wada xidhiidhi kartaa dhammaan sheekaysigaaga kombuyuutarkaaga. Sidaa darteed, way kuu fududdahay inaad ka sii wadato wadahadalka aaladda aad doorbideyso. Soo dejiso barnaamijka desktop desktop ama tag WhatsApp Web.
Wicitaanka Codka iyo Fiidiyowga ee WhatsApp - Si xor ah u hadal: Wicitaannada codka, waxaad kula hadli kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada bilaash, xitaa haddii ay dal kale joogaan. Marka codka ama qoraalka uusan ku filneyn, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad si fool ka fool ah ula sheekaysatid wicitaan fiidiyow oo bilaash ah. Wicitaanka maqalka iyo muuqaalka ah ee WhatsApp wuxuu adeegsadaa khadka internetka ee taleefankaaga.
Qarsoodi-Dhammaad-Dhammaad - Had iyo jeer Hayso: Sirta dhammaadka-dhamaadka waxaa lagu hagaajiyay nooca ugu dambeeya ee WhatsApp. Fariimahaaga iyo wicitaanadaada waxaa lagu ilaalinayaa sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka. Adiga iyo qofka aad la xiriirtaan oo keliya ayaa wax akhrin kara ama dhageysan kara iyaga, oo cid u dhexeysa (xitaa WhatsApp) ma aqrin karo ama ma dhageysan karto.
Sawirro iyo Fiidiyowyo - Wadaag Waxyaabaha Ugu Muhiimsan: Waxaad isla markiiba ku diri kartaa sawirro iyo fiidiyowyo WhatsApp. Xitaa waad la wadaagi kartaa daqiiqad muhiim ah oo aad ka soo qabatay kamarad ku dhex jirta. Xawaaraha isku xirkaagu micno malahan; Ku dirista sawirrada iyo fiidiyowyada WhatsApp waa dhakhso.
Farriimaha Codka - Ka hadal Maskaxdaada: Waad duubi kartaa fariin cod si aad u tidhaahdid salaanta gaaban ama aad wax dheer u tidhaahdid hal tuubbo oo keliya.
Dukumiintiyo - Wadaagista Dukumintiyada Oo Si Fudud Loo Sameeyay: U dir PDF-yada, dukumiintiyada, xaashiyaha, istuujiska, iyo waxyaabo kale oo badan adigoon dhib ku qabin emaylka iyo barnaamijyada faylasha lagu wadaago. Waxaad diri kartaa dukumiintiyo gaaraya 100 MB.
Marka, sidee loo soo dejisan karaa WhatsApp Desktop? Sidee loogu adeegsadaa WhatsApp kombiyuutarka? Waxaad ka isticmaali kartaa WhatsApp miiskaaga kumbiyuutarka adigoon u baahnayn biraawsar. Si aad u soo degsato barnaamijka WhatsApp Desktop, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa; Adoo gujinaya batoonka Download WhatsApp ee kor ku xusan. (Waxay ku socotaa Windows 8.1 ama wax ka cusub oo hadaad isticmaaleyso 32-bit Windows operating system, waa inaad kala soo baxdaa linkiga labaad.) Ku rakibida barnaamijka Whatsapp Desktop-ka waa u fududahay sida loo soo dajiyo. Ka dib markii soo dejintu dhammaato, fur feylka .exe oo raac tilmaamaha si aad u buuxiso rakibaadda.
Waxaad ku isticmaali kartaa WhatsApp kombiyuutarkaaga laba siyaabood oo kala duwan: WhatsApp Web iyo WhatsApp Desktop. WhatsApp Web waa barnaamijka ku saleysan biraawsarka ee WhatsApp. WhatsApp Desktop waa codsi aad ku rakibi karto kombiyuutarkaaga. Desktop app iyo WhatsApp Web waa koronto ku saleysan kumbuyuutarka koontada WhatsApp ee taleefankaaga. Farriimaha aad dirto iyo aad hesho waxay ka kooban yihiin taleefankaaga iyo kombiyuutarkaaga. Marka waxaad ka arki kartaa fariimahaaga labada qalab.
WhatsApp Messenger Noocyada
Cabirka Faylka: 140.00 MB
Horumar: WhatsApp Inc.